इतिहाँस मै पहिलोपटक हिज सांसद भवनमा घटेको यो अनौठो घटना? – Hamro24News
July 19, 2021 adminLeaveaComment on इतिहाँस मै पहिलोपटक हिज सांसद भवनमा घटेको यो अनौठो घटना?
एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित प्रतिनिधिसभा सदस्यले फ्लोर क्रस गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका छन् । एमालेको संसदीय दलको बैठकले ह्वापी जारी गरेर विश्वासको मतको विपक्षीमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
उनको आफ्नै दल नेपाली कांग्रेससँगै माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एमालेका केही सांसद र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले उनलाई मत दिएका हुन् । देउवाको पक्षमा नेपाल र ओली दुवै समूहका केही सांसदले फ्लोर क्रस गरी मतदान गरे भने राप्रपा र नेमकिपाका एक-एक सांसदले मतदान गरेनन् ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
मध्यरातमा वडाध्यक्षको यो कस्तो धन्दा ? परे प्रहरीको फन्दामा?
माधव नेपालको प्रतिक्रिया : निरंकुश प्रवृत्तिको हार भयो, जनताको जित
अन्तरजातीय विवाह गरेर जंगलमा बसेका जोडीलाई घर पुगेपछि आफन्तले अलग्याए
कुन ‘ब्लड’ ग्रुपले कस्ता खानेकु?